Dabere na ihe ụdị android egwuregwu ọtụtụ mmasị ị na e nwere ihe maka onye ọ bụla, sitere na site egwuregwu ga-adịru ogologo nke gị na-aga aga,-egwu egwuregwu ga-i engrossed nke ukwuu nke mere, na ha ga-ebu gị pụọ n'ime ọzọ ụwa kpamkpam.
Ndepụta nke android egwuregwu ọtụtụ bụ mgbe niile a na-emelite, na Ọ mejupụtara egwuregwu na-akwụ ụgwọ maka na free. Dị ka GTA ebe ị pụrụ mgbe pụọ oge gị ịsụ ala pedestrians, agbapụ omempụ na-egbu ọchụ, ndị mmadụ maka ego.
Ya mere, ebe bụ a ọsọ-ala nke n'elu 50 free, na-akwụ na-egwu android egwuregwu ọtụtụ, n'ihi na ị na-anya na.
Ahịa: $0.79 - $79.99
Nke a bụ ihe kasị mma Arcade racing egwuregwu. Nke a usoro nke racing ụgbọala egwuregwu ruru a ọhụrụ ebe. The stunts bụ ufiop na ike ịrụ ọrụ bụ elu na-agba. Nke a na-akwọ ụgbọala ahụmahụ nwere ọhụrụ engine nke a kwadoro site na a ọhụrụ ọkọlọtọ na physics.
2. Ka See Tables
Ahịa: $0.58 - $150.00
Ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya poker mgbe ahụ ị ga-a n'anya egwuregwu. Nke a ndụ poker egwuregwu na-egwuri megide ezigbo ndụ Player n'ụwa nile. Denyere aha gị na adreesị email ma ọ Facebook akaụntụ, na na n'elu 25.000.000 egwuregwu na Android ọ bụ ihe ijuanya na egwuregwu a bụ ewu nnọọ ewu.
Ahịa: $1.32 - $16.51
Nke a ọtụtụ egwuregwu bụ n'ezie na oge online egwuregwu. Nke a bụ egwuregwu a n'ezie na oge egwuregwu, ebe ị na-egwu na ihe ọ bụla na-anọ Player, na ihe nile n'otu oge. Ị nwere ike ịhọrọ igwu egwu na enyi gị ma ọ bụ dakọtara onwe gị megide zuru ezu na-amabughị bụ ndị si gafee ụwa a niile gburugburu fun na-agba ọsọ egwuregwu.
Nke a bụ ihe ezi uche egwuregwu nke ọdọ mmiri ma ọ bụ snooker. Ọ na lere otu n'ime ndị kasị ezi uche egwuregwu na-egwu na mkpanaka gị na. Play ọdọ mmiri na snooker na zuru 3D oyiyi, na gburugburu na-na-isiike na textured. Ọ bụrụ na ị chọrọ zuru ezu egwuregwu ngwugwu mgbe ahụ, a egwuregwu n'ihi na ị n'agbanyeghị ma ị bụ onye oké njọ ọkpụkpọ ma ọ bụ.
Ahịa: $0.53 - $69.99
Egwuregwu a bụ ihe kasị mma na-alụ ọgụ ahụmahụ ị ga-ahụ. Ndịna-emeputa bụ n'agba buru àmà, na-enwe a ọkpọ ọrụ bụ aha nke egwuregwu. I nwere ike imeri ezigbo nwa anụmanụ na njikwa dị nnọọ kensinammuo.
6. Oge a na mbuso 4: Zero Hour
Ahịa: $1.49 - $79.99
Egwuregwu a e weghachiri maka smartphone. Nke a bụ egwuregwu edinam juru n'ọnụ na nwere dum ọhụrụ isi maka egwuregwu Player, na-agbalị ha aka na. Zere mbibi na a n'ọtụtụ zuru ụwa ọnụ ole na ole nke J.Randall agha a zụrụ azụ. Ị ga-soro ala ndị ndú nke ụwa na-azọpụta ha n'aka a eyi ọha egwu.
Ị na-alụ ọgụ mmụọ ọjọọ n'ihi na alaeze gị na posses dị iche iche ike n'ụzọ. E nwere 4 odide ndị i nwere ike ime agha na. E nwere ndị mmụọ ọjọọ na ị ga-alụ ọgụ, na ọtụtụ mode na bụ na-akpali akpali; e nwekwara a ọnwụ egwuregwu mode dị ka mma. Ị ga-amụta nweta nkwalite gị ike na nkà, site na-alụ ọgụ ọzọ na upgrading gị ngwá agha bụ dịnụ.
Egwuregwu a awade Player a ezigbo ụgbọala na ahụmahụ na ụfọdụ ndị kasị prestigious ụgbọala. The njem bụ dị ka ezi iji ndụ dị ka a egwuregwu nwere ike inwe. The ịnya ụgbọ ala larịị bụ na-enwetụbeghị ụdị na-akpali akpali bụ ma ị na-egwu na ọtụtụ ma ọ bụ otu ọkpụkpọ mode.
9. Ígwè Nwoke 3
A edinam juru n'ọnụ na ngwa ngwa paced egwuregwu, bụ ihe-adịghị agwụ agwụ na-agba ọsọ. Tony Stark bụ ugbu a a peacekeeper ma ọ ka nwere ihe na ihu egwu si gburugburu ụwa, na Ígwè Nwoke bụ naanị otu onye nwere ike na-elekọta ha na ụwa.
Ahịa: $1.07 - $125.04
Egwuregwu a-enye gị ohere ọsọ onye ọ bụla n'oge ọ bụla na ihe ọ bụla ụgbọ ala. A pụtara ịnya ụgbọ ala egwuregwu na-enye gị ohere ọkụ n'okporo ámá. Egwuregwu a nwere a 22 ụgbọala okporo, nke a na-nọgidere na-eto eto. The ụgbọala bụ zuru ezu na e nwere ihe karịrị 100 n'ime ha n'ihi na ị na-akwọ ụgbọala. E nwere isi, mọ ịma aka, oge ọnwụnwa na oge gbanwere ọtụtụ technology nke bụ otutu. Nke a-enye gị ohere ọsọ n'oge ọ bụla, n'ebe ọ bụla na onye ọ bụla.
Ahịa: $ 1.25 - $6.29
A pụrụ iche ịnya ụgbọ ala egwuregwu ga-ị ihe ma ị ga-achụpụkwa ọma iji nweta ha. Ị na-agaghị agbụrụ na ị ga-anapughi dị ka ma ọ bụrụ na ị nọ GTA. Egwuregwu a bụ ihe niile banyere ụgbọala n'ụzọ ziri ezi na n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Isi ebumnuche nke egwuregwu bụ iti egwuregwu. E nwere isi na ntozu n'ihi na ị na ịgbawa.
Ahịa: $0.66 - $5.76
Ị nwere ike ma na-a cop eke mmebi racers ma ọ bụ i nwere ike ịbụ racer. Ọ bụghị naanị na ị ga-esi na ohere ka ọ na-ekpo ọkụ ịchụso a racer, ma ị na-na-na ohere na-racer, a na elu na-agba chụrụ egwuregwu. Ọ bụrụ na ị kụrụ a racer mgbe ahụ ị ga-elu ihe na ọ bụrụ na unu na-achụso ha. The ọtụtụ mode-enyere gị aka ọsọ ndị ọzọ na ọkwọ ụgbọala na-ahụ onye nke kacha mma okporo ụzọ ọkwọ ụgbọala bụ.
Ahịa: $0.59 - $23.00
Na-egosi na Ninja Chicken bụ kasị agba ọsọ, site pitting onwe gị megide ndị ọzọ racers na nke a n'elu ikpo okwu egwuregwu na bụ mara mma na fun. Chọta onwe gị n'ala nke dinosaurs,, lezienụ anya maka ndị amoosu na-efe efe banyere.
14. mgbe ebighị ebi Warriors2
Ahịa: $0.99 - $77.99
Egwuregwu a na-egwuri na North nke Udar, ebe ị ga-alụ ọgụ mmụọ ọjọọ bụ ndị e etinye niile ike ha ọnụ n'ime otu ìgwè nke ụlọ elu. The n'ala a dọwara adọwa ebe mbụ agha na ugbu a, ha na-eyi egwu na-agbalị na-eme otu ihe ọzọ. Dị ka mgbe ebighị ebi Warriors ị ga-mkpa na-alụ ọgụ ndị mmụọ ọjọọ na kwụsị agha si na-eme ọzọ.
15. Hell Fire: na-akpọ
Ahịa: $0.89 - $99.99
Ọnụ ụzọ ámá n'etiti ndị mmụọ ọjọọ n'ógbè anyị na e unlocked, na nzube ha iji mee ka ọdachi na-udo anyị ala. Ị bụ otu ọnụ ụzọ ámá dinta na akụkụ rifts mkpa ka e bibie, otú i nwere iji kwụsị agha nke Hell Fire tupu ọ bụ akaha. Ugbu a, ọ bụ ala gị na-agbalị na-emechi ọnụ ụzọ ámá nke hell.
E nwere mgbape na Earth jikọrọ ọnụ na ugbu a ụmụ anụmanụ mkpa ịchọta a ebe nchekwa. Ya mere nanị nhọrọ bụ iwu ọhụrụ obodo niile ndị enyi ha. Diego, Sid, Manny na Ellie ihu ihe ịma aka a dị ka ha na-ezute ịtụnanya na fun n'ụzọ.
Eziokwu a atụmatụ egwuregwu adịghị ewere ọnọdụ na ihuenyo, ọ na-eme ke ata ụwa. E nwere akara gafee ụwa na ị ga-ma ọ bụ chebe na egwuregwu a, ma ugbu a niile i nwere ime bụ ikpebi ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ akụkụ nke ndị na-eguzogide ma ọ bụ akụkụ nke atụgharịkwa.
18. Nsogbu nke Clans
Ahịa: $3.99 - $79.99
Egwuregwu a bụ ihe niile banyere atụmatụ, na-ewu gị n'obodo nta, na-eweli agha gị na-ewere na gị na-emegide. Nsogbu nke Clans bụ a ọtụtụ egwuregwu ebe ị ọgụ gị iro na ha na-awakpo unu, na na ọtụtụ ngwá agha ịhọrọ site na ị ga-adị mkpụmkpụ nke ụzọ ibibi gị mmegide. Kwụsị Raiders na ibu agha ọtụtụ nde ndị ọzọ egwuregwu.
19. Minecraft: n'akpa uwe Edition
Egwuregwu a na-agụnye ihe na lanarị ụdịdị, na n'ọgba, n'obodo nta na enweghi ụwa na-achọpụta. Inyocha ụwa dị ka ị mepụtara na nka ya ụlọ blocks. Ọ bụrụ na ị nwere oge na batrị ị nwere ike ịdị na-akpọ Minecraft mgbe na-akwagharị.
20. Oge a na mbuso 5: blackout
Nke a fps shooter egwuregwu jupụtara edinam dị ka nke a ọhụrụ nkeji nkeji na-ewe égbè egwuregwu na-esonụ larịị. Òkù enyi gị ma ọ bụ mepụta a squad na-anwale ma gị onye ma ọ bụ otu nkà megide ndị ọzọ egwuregwu. Nke a ike agha egwuregwu ga na-ị ọbịa ebe enye elu abụghị otu nhọrọ.
Play na niile ọkacha mmasị gị NBA kpakpando dị ka ị jam ọnụ a na elu-efe efe basketball egwuregwu. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị otu ma ọ bụ kpakpando ahụ ebe a bụ gị ohere na-egwu n'akụkụ site n'akụkụ na ha, na 30 NBA ìgwè ịhọrọ site na egwu na-akpọ basketball ka nwetara ọbụna ihe ọzọ na-akpali akpali.
22. Order & Ọgba aghara Online
Ọtụtụ puku Player na-anụ ụtọ nke a ahụmahụ ọhụrụ, ha na-teaming elu na ndị enyi ha na-akụkụ quests, ebe ịgagharị a fantasy ụwa n'otu oge. Were gị Guild na ihe njem dị ka ị nweta feats na ọ bụ nanị dike nwere ike nweta, na-etinye onwe gị na leaderboard.
23. nwayọọ nwayọọ amịkọrọ HD
Nke a kediegwu egwuregwu bụ Nchikota lanarị, physics na-eri nri ndị ọzọ egwuregwu. Iji lanarị ị ga-eto site na-adọrọ ndị ọzọ nta ntule. Ma e nwere ndị ọzọ ibu anụ ahụ ga-chọrọ iri nri gị elu dị ka mma. Ndịna-emeputa bụ ịtụnanya na soundtrack ga na-ị jụụ ya ambient ụda. Ya mere ị dị njikere pụta? Ị ga-eto site na-adọrọ nta motes.
24. Pool ezumike Pro: 3D bịladị
Ahịa: $ 1.20
Egwuregwu a nwere magburu onwe-emeputa nke bụ ezi na ezi uche. Ị nwere ike ịhọrọ na-egwu ndị ọzọ ọrụ online ma ọ bụ megide kọmputa. The edinam na ngwa ngwa paced-eji ire ụtọ na 3D ndịna-emeputa-eme ka egwuregwu a na-anọpụ iche ike. Agbalị aka gị na snooker ma ọ bụ ọdọ mmiri ma ọ bụ ọbụna na-egwu a egwuregwu ị nwere ike mgbe na-egwuri tupu gụnyere bịladị ma ọ bụ carom wdg
Ahịa: $1.49 - $69.99
Nke a ufiop racing egwuregwu na-ewe ihe niile n'ime Overdrive. -Akụkụ na agbụrụ ebe i nwere ike nweta nkwalite gị-agba ịnyịnya riders na hydro jets, ndịna-emeputa e mma na ugbu a ị nwere ike onwe gị a ọrụ na ọrụ mode. E nwere ọhụrụ aghụghọ na a dum ọhụrụ stunt usoro n'ihi na ị na-agbalị si.
26. Oké Osimiri Agha
A na osisi egwuregwu e me nri ruo ụbọchị, egwuregwu ozugbo maara dị ka agha ụgbọ mmiri e nyere ọhụrụ mgbazinye nke ndụ. Ị nwere ike ugbu egwu ndị ọzọ si gburugburu ụwa, na gị kwakọbakwa ngwá agha i nwere ị nwere ike ibibi gị na-emegide. Họrọ si ebukọrọ, radars na ndị ọzọ na ngwá agha iji merie n'oké osimiri.
Ahịa: $0.65 - $131.99
Nke a poker dị ka o kwesịrị, nke bụ ya mere ọ họọrọ nọmba 1 ka ndị kasị mma onye ọrụ ahụmahụ. Outsmart gị na-emegide na-ahụ ma ọ bụrụ na i nwere ike na na poker iru-emeri jackpot. Na $50.000 na mbụ ibe nke bụ free, na onyinye na ụgwọ ọrụ na kwa ụbọchị otú mmadụ ọ bụla pụrụ bụghị ịdị na-akpọ egwuregwu a.
Ahịa: $0.76 - $75.33
na eso ụzọ Nwụrụ Anwụ ịkpalite mere egwuregwu a nke dị ka ewu ewu. Nke a onye mbụ shooter egwuregwu bụ ịtụnanya, dị ka ị pụrụ ịhụ site ndịna-emeputa na 12 ọkpụkpọ ọnwụ ọkụ nke unu ga-akụkụ nke.
Na-ewu gị obodo ma na-onyeisi obodo na egwuregwu a na ka e re-imaged maka mkpanaka ngwaọrụ. Obodo gị ga-apụ iche ị na dị ka obodo gị na-aghọ ibu ị ga-enwe ihe ndị ga-chọrọ ịkwaga n'ime ya. Ya mere, ihe ụmụ amaala pụtara na ha ga-enwe ihe mkpa, ugbu a, ọ bụ ọrụ gị na-obodo n'okpuru akara.
Ahịa: $0.62 - $ 3.00
Egwuregwu a ga-enwe na eti mkpu na enyi gị na-ebute buttons. N'ije fluxtrunions nwere ike ụda pụrụ iche ma ha niile na-akụkụ nke a egwuregwu. Na-eti mkpu technobabble na enyi gị ruo mgbe ha ụgbọ mmiri explodes; na-eso ntụziaka na-oge mwute. Ma, ndị a ntụziaka na-na-na-zitere gị teammates otú nchikota tupu oge na-agba si bụ ihe egwuregwu a niile bụ ihe, na ihe niile nke a na-aga dị ka ị na-agbalị si na-agba ọsọ na-etiwapụ kpakpando.
31. Okwu na Enyi - ịsị
Ahịa: $0.76 - $7.62
Ọ ga-eme ka ị na-egwu a mma egwuregwu na ọ ga-enyere gị aka chọpụta nke okwu, gaara aka mma n'ihi na ị na-egwu, n'ihi ya, ị nwere ike nweta a elu akara. Mepụta okwu na iji taịl nile na iti gị emegide.
Ịbụ onye dike na enwetaghị crooks ke edinam. Ka ha gbapụ na ụgbọala na-etinye aka ná ngwa ngwa paced ụgbọala achụgharị, ma ọ bụ ọbụna na ụkwụ ka ha na-agba ọsọ n'okporo ámá. Nwere ike ị chọrọ ịbụ akụkụ nke Coast Nche dị ka ị iduzi ụgbọ mmiri ahụ, ma ọ bụ ọbụna ofufe a helikopta iji napụta a ụgbọ si umu azu shark. N'agbanyeghị ihe ị na-achọ ime na e nwere ihe maka onye ọ bụla na egwuregwu a.
Ahịa: $0.61 - $61.47
Nke a ọtụtụ racing egwuregwu nwere ihe nile ọkacha mmasị gị odide nke bụ akụkụ nke mega hit egwuregwu Ninjump. Players Si gburugburu ụwa na-akụkụ na egwuregwu a ka ha na-alụso onye ọ bụla ọzọ, nke bụ ihe ị ga-enwe ike ime. Race megide atọ Player na ozugbo ma ha bụ ndị random mmadụ ma ọ bụ ndị enyi gị si Facebook.
Ahịa: $0.69 - $69.31
Egwuregwu a nke poker bụ ihe ezi uche na imewe bụ ọkaibe, egwuregwu a nwere ọhụrụ atụmatụ na mastery na mpi, e a ọhụrụ larịị na egwuregwu a. Ọ bụrụ na ị na-achọ a poker ahụmahụ nke bụ ezigbo mgbe ahụ Zynga poker bụ otu maka gị.
Play cheesi na ndị enyi gị na na ọ laa dị ka mma. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-adịghị enyi na-egwu cheesi ahụ mgbe ị na na chi n'ihi na egwuregwu a nwere random emegide nke ị nwere ike ịhọrọ site na. Mepụta akaụntụ gị na mgbe ahụ ka ndị ọzọ na-egwu megide unu, na-Chess Time gbanyere push Ịma Ọkwa na ga na-ị maara nke gị na-esonụ Nkea.
Bụ egwuregwu na-egwuri n'etiti abụọ ìgwè acha anụnụ anụnụ na-acha uhie uhie. Egwuregwu a nke hide na-achọ, bụ ebe egwuregwu nwere ike igbanwe onwe ha dị ka props. The otu na-ezo nwere 20 sekọnd na mgbe ahụ red otu ga-ahụ ha. Mgbe ahụ, ọ bụ uzo nke na-abụghị otu zoo.
Ahịa: $0.80 - $79.99
Nke a RC racing egwuregwu nwere ọtụtụ nkebi na ụdịdị nke ga na-ị ọbịa. Race megide Player si n'ụwa nile na ruo 4 Player na niile na ozugbo mode. Ị ga-ọbụna inwe ụgbọala gị nrọ ụgbọ ala, na-esi na aka gị na-adịghị agwụ agwụ ụgwọ ọrụ nke ga-liven elu gị egwuregwu.
38. Nka City òtù ndị omempụ
Inyocha a obodo a òtù na ike odachi ofụri n'okporo ámá. Ị nwere ike ịzụta egbe, ụgbọala egwuregwu ụgbọala na-jụụ, na ọbụna na-aga site lanarị ọzọ. Ọ bụ oge na ibuso a agha na obodo a na-eme na ndị ọzọ Player dị ka mma.
39. kpatụ aka gaa na Gbaa US
Ahịa: $1.49 - $75.49
Best US igba egwuregwu ị ga-egwu. Play na ma ọ bụ megide ọkacha mmasị gị ìgwè, ịbụ akụkụ nke a ndorondoro, ma ọ bụ na-ahọrọ na-abụ otu ọkpụkpọ na a otu na otu egwuregwu. Ndịna-emeputa bụ ikenyeneke mbiet na otú ahụkwa bụ animations. E nwere otu ọkpụkpọ mode, a Obere egwuregwu na enye ụgwọ ọrụ na-adịghị agwụ agwụ ichekwa ọzọ na-egwuri.
40. Agha Enwe si
Ahịa: $0.69 - $5.49
Naanị enwe ọchịchị na egwuregwu a. Nụrụnụ aha gị na-chanted na dị ka ndị dike akpọkọta, nweta onwe gị njikere, n'ihi na a agha ahụ ga-abụ kasị ufiop ihe ị ga-mgbe mpi, na ndụ gị. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata onye bụ ihe kasị mma mgbe ahụ bụ naanị ụzọ iji chọpụta bụ na-alụ ọgụ.
Ahịa: $0.63 - $4.55
Race megide ndị enyi gị ma ọ bụ ndị ị na-amaghị. Na nke a elu octane pụrụ n'ụzọ racing egwuregwu. The egwuregwu bụ obere na ufiop unu niile na-adọpụ na n'elu ntụpọ, agbụrụ megide mmadụ anọ ma ọ bụ obere ka ị Ị kpọghee ekwt ọhụrụ ụgbọala na nkà etoju.
42. Agha agba Gold
Ahịa: $0.58 - $58.73
A ọtụtụ shooter ahụmahụ nke jupụtara whacky ngwá agha, na klas ndị pụrụ iche na e nwere ndị nke 11 nke ha. Play megide ndị ọzọ ọkpụkpọ n'ụwa nile dị ka nke a N'ọgbụgba égbè egwuregwu eme ka ị nọgide risịrị. E nwere ọtụtụ ngwá agha na-ị na ọbịa na e nwere ọtụtụ nke egwuregwu ụdịdị ịhọrọ site na dị ka mma.
Ahịa: $0.72 - $74.31
Nke a bụ a Paintball egwuregwu nke maka oge mbụ e kere na 3D. Egwuregwu e dere ezigbo egwuregwu gear, ozugbo ọtụtụ ma ọ bụrụ na ị na-adịghị amịrị ọbara mgbe ahụ ị na-adịghị ga-esi gị igbu. Ị kpọghee ekwt ọhụrụ map na ndị ọzọ na goodies dị ka ị eme ka ụzọ gị ruo n'elu ntụpọ. Jikọọ na ndị enyi gị ma na-atọ ụtọ nke ukwuu na-agbapụ ha.
44. Oge a na mbuso 4: Zero Hour
Nyere zere nuclear Mbibi a edinam juru n'ọnụ N'ọgbụgba égbè egwuregwu. Nuclear agha bụ banyere ime na naanị nọ n'ọkwá dị elu ìgwè ndị agha nwere ike inyere ịzọpụta ụwa si mbibi. A eyi ọha egwu ìgwè nwere ndị ndú ụwa ẹkenịmde dị ka hostages na naanị gị na otu nwere ike ịzọpụta ha.
45.-apụghị ibibi ebibi
Ahịa: $0.99 - $79.99
Jiri gị ụgbọala azọpịa ma na-ebibi ndị iro gị ka unu gburugburu elu dị ka ọtụtụ egbe na ngwá agha dị ka i nwere ike. Nkume gị na-emegide n'ájá ka ị na-aga jidesie igbu stof elu. Hazie gị ụgbọala ma mee ka ọ kasị atụ egwu ihe na anọ wiil. Igosi stunts na na na na na na-anọ egwuregwu na a post apocalyptic egwuregwu nke mbibi.
Nke a hack na ịsụ na ịgba ọhịa egwuregwu na-edoziri na a fantasy ụwa, ebe ị ga na-edebe udo. Na iba na a njem na mma agha gị na aka, dị ka ị njem site ise dị iche iche n'ógbè jupụtara nnukwu anụ. Ị nwere ike igwu egwuregwu a dị ka otu ọkpụkpọ ma ọ bụ ịkpọ ndị enyi gị iji sonyere na agha.
Ahịa: $0.77 - $54.86
Team elu na-achị onye ndú mbadamba dị ka ị alụ ọgụ ụzọ gị ebe dị iche iche tournaments. Chọta ọhụrụ ndị mmadụ na-egwu n'ime chat ụlọ ma ọ bụ ọbụna na-egwu ndị enyi gị. Lee otú oge ị nwere ike chebe ndị generator dị ka ọ na zaps a onye na ibelata, nke bụ elu voltaji.
48. Asphalt 7: Okpomọkụ
-Ohere ụgbọala 60 dị iche iche ụgbọala si emepụta na ooze ugwu. Nke a bụ egwuregwu pụtara na-emeputa dị oke mma. Ị nwere ike ugbu-na elu ise ndị ọzọ egwuregwu. Ebe ị ga-enwe ike ịhụ nke otu onye n'ime unu bụ ihe kasị mma na ihe ụfọdụ na-ahụ ma ọ bụrụ na i nwere ike iti ọ bụla ọzọ. E nwere ihe isii iche iche egwuregwu ụdịdị ịhọrọ site na ọtụtụ ihe ndị ọzọ site na nke a egwuregwu.
A ọgụ racing egwuregwu nke bụ eri ahụ. Ibibi gị na-emegide gị na egbe na ngwá agha dị ka ị ọsọ megide ha, ma ọ bụrụ na ị iti ha ị pụkwara inwe ụgbọala ha dị ka mma. Nweta Nitro boosts dị ka ị na-eme flips na ndị ọzọ na stunts, na ụgbọala na otutu na otu tracks.
Ahịa: $ 1.00 - $50.50
Off ụzọ okuku ịnya ụgbọ ala egwuregwu ebe ị ga-ahọrọ na ụgbọala ị chọrọ ụgbọala. Mpi na isii dị iche iche ihe, na inyocha na dị iche iche na-emeghe ụwa, ma na-free Ebe e si nweta ụbọchị ọ bụla ị na-egwu egwuregwu.
> Resource> emulator> Top 50 Android Multiplayer Games